သင်၏ Windows PC တွင် Android မိုဘိုင်းအက်ပ်များကိုဖွင့်နည်း Androidsis
[ဗွီဒီယို] ဒါဆိုသင့်ရဲ့ PC မှာ Android အက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုသင်၏ဖုန်းဖြင့်ဖွင့်နိုင်သည်
Manuel Ramirez | | Android application များ, NOTICIAS, Samsung
သင်၏ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး၎င်းကမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ မည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုရှင်းပြထားသောဗီဒီယိုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ငါတို့ကိုပြမယ် သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသင့်ရဲ့ PC မှာ Android အက်ပ်တွေဘယ်လိုထားမလဲ.
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပင်ပြုလိမ့်မည် taskbar ကိုဖြတ်လမ်းသတ်မှတ်နိုင်ခြင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ Android မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု။ တနည်းအားဖြင့် WhatsApp၊ ထိုလူမှုကွန်ယက်သို့မဟုတ်ရာသီဥတုအသုံးချပရိုဂရမ်သည်၎င်းတို့ကိုဝင်ရောက်ရန် taskbar တွင်ထားနိုင်သည်။
သင်၏ Windows PC 20 ရှိသင်၏ Android မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ
ဒီရက်သတ္တပတ်များကမွမ်းမံခဲ့သည် Windows ကိုဆက်သွယ်မှုကိုထောက်ပံ့နိုင်မှ Windows 10 သင်၏မိုဘိုင်းမှတစ်ဆင့်အက်ပ်များကိုဖွင့်ပါ။ ၎င်းသည် Mirror ကိုသုံးရန်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီးသင်၏မိုဘိုင်းပေါ်ရှိအက်ပလီကေးရှင်းများကိုရယူရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Android ဖုန်းကို configure လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဖြစ်ရပ်မှာ Galaxy Note 10+၊ Windows Connection နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာအက်ပလီကေးရှင်း Windows 10 ပါသောသင့်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုပြုပြင်ပြီးပါပြီ။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းမှမိုဘိုင်းအက်ပ်တစ်ခုကိုချက်ချင်းစတင်နိုင်ရန်နှိပ်ပါ ပြီးတော့အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ PC မျက်နှာပြင်ကနေကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
ငါတို့ပြောတာ ဂိမ်းများ၊ WhatsApp၊ Telegram၊ Facebook၊၊ ဗွီဒီယိုနှင့်ငါတို့မိုဘိုင်းအတွက်သိထားသည့်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်။ သူ့ကိုသူ့ဗီဒီယိုမှာသင်ပေးပြီးပြီ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ကူးခြင်း / ကူးခြင်းအတွက် Windows ဆက်သွယ်မှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း နှစ်ခုကိရိယာများအကြား, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လို ဒီကိရိယာနှစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူချိတ်ဆက်ပါ.
ဒါကဘယ်လိုဖြစ်ပါသည် သင့်ဖုန်းရှိ Android အက်ပ်များ:
မင်းရဲ့ဖုန်းကိုငါတို့ PC မှာဖွင့်တယ် Windows 10 နှင့်အတူ
ကျနော်တို့« Apps » tab ကိုသွားပါ
Y တစ်ခုလုံးကိုစာရင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ငါတို့မှာရှိတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေအများကြီး
ငါတို့တစ် ဦး ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ သူရဲ့ကိုယ်ပိုင် ၀ င်းဒိုးကငါတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဘယ်လိုပေါ်လာသလဲဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်
ဒါဆိုငါတို့ပေါင်းနိုင်သည် taskbar တစ်ခုဝင်ရောက်ခွင့် သင့်ဖုန်းရှိ Android အပလီကေးရှင်းများ:
ငါတို့နှိပ်ပါ အက်ပ်များထဲမှတစ်ခုကိုညာဖက်နှိပ်ပါ သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်ရှိစာရင်းထဲတွင်
ငါတို့ရွေး taskbar ထဲသို့ထည့်ပါ
ယခုကျွန်ုပ်တို့ app ကိုတိုက်ရိုက်ရယူသုံးစွဲနိုင်ပါပြီ
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့တွင်မိုဘိုင်းဖုန်းရှိပါကမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမိုဘိုင်းဖုန်းရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ၏ taskbar ပေါ်ရှိဖြတ်လမ်းကိုနှိပ်လိုက်လျှင်လက်ဗွေကိုဖွင့်ရန်၎င်းကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ဒီ app ကငါတို့ PC မှာဖွင့်မယ် ငါတို့မိုဘိုင်းပေါ်မှာလိုပဲ
ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် ငါတို့ install လုပ်ထားသော apps အားလုံးနှင့်အတူလုပ်ပါ အချို့သောperfectlyုံတော့အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုပြောရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်တွင်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားခဲ့သောသူများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သွားပြီ ဖြစ်၍ ၎င်းသည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြိုးစားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းသည့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံး သင်၏ Android mobile နှင့် Windows 10 ဆက်သွယ်မှုနှင့် PC ရှိသင့်ဖုန်းမှတစ်ဆင့်အံ့ synchron ဖွယ်ကောင်းအောင်ပြုလုပ်ထားသော Windows XNUMX ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android application များ » [ဗွီဒီယို] ဒါဆိုသင့်ရဲ့ PC မှာ Android အက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုသင်၏ဖုန်းဖြင့်ဖွင့်နိုင်သည်
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်ငလျင်ရှာဖွေစက်သည် Google မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြသသည်
TikTok အက်ပလီကေးရှင်းသည် Play Store နှင့်ယူအက်စ်အက်ပလီကေးရှင်းများမှပျောက်ကွယ်သွားသည်